Izindlela ezi-5 Ezicocekile Semalt SEO Amathuluzi kanye neWebhu Analytics Thuthukisa Izinga Lakho L Iwebhusayithi
Ingabe ungumnikazi webhizinisi elincane, isitolo se-inthanethi, isiqalo, i-freelancer, noma umbhali obezama ukwenza ukuthi iwebhusayithi yabo ibalwe isikhathi eside kakhulu futhi awuzange ube nenhlanhla kuze kube manje?
Ngabe bewuthola umhlaba we-SEO uchungechunge lokungaziphathi kahle, lokho kungenangqondo futhi kudla isikhathi sakho esiningi nomzamo?
Ukwenza iwebhusayithi yakho ibalwe kungenye yezinto ezibaluleke kakhulu ekusetshenzisweni kwebhizinisi online, nokuqinisekisa ukuthi iwebhusayithi yakho ivela ekhasini lokuqala le-Google kufanele ibe ngenye yezinto eziza kuqala kuwe.
Ngokusho kocwaningo, ama-95% ezithuthi zomgwaqo ezitholakala kumawebhusayithi avela ekhasini lokuqala le-Google, kanti yi-5% kuphela etholwa ngamakhasi alandelayo.
Manje, ngaphambi kokuba ucabange ukuthi lo mdlalo usuphelile, ukwenza isayithi lakho libalwe akuyona yonke inzima leyo. Kudinga ukubekezela nokuzinikezela isikhathi eside. E-Semalt, siyaqonda ukuthi i-chunk enkulu yesikhathi sakho ichithwa isebenza ibhizinisi lakho nokuphatha wonke umthwalo ozoza nayo.
Kungebangelo sihlele amathuluzi wethu we-SEO nezinsizakalo zeWebhu Analytics ukuthi zingakusizi ukukala phezulu ku-Google, kepha futhi zikunikeze ukufinyelela kudatha ebalulekile kanye nezibalo zabantu abavakashela iwebhusayithi yakho. Ngokuhamba kwesikhathi, lolu lwazi lungathonya izinqumo zakho zebhizinisi, likuvumela ukuthi ukhombe indlela yokuziphatha kwabathengi ngokuthola izidingo zabo ngokunembile futhi ekugcineni uvale izinkokhelo eziningi.
Abantu abasemuva kukaSemalt basebenze ngokungakhathali nangomdlandla ekwakheni lamathuluzi e-SEO kusukela eminyakeni yokuzibonela mathupha. Ake sihlolisise ukuthi amathuluzi eSemalt SEO nezici zeWebhu Analytics zingakusiza kanjani kanye nebhizinisi lakho ukuthi likhule kahle.
Izindlela ezi-5 zeSemalt SEO Amathuluzi Nama-Webt Analytics Thuthukisa Izinga Lakho Iwebhusayithi
1. Iwebhusayithi Optimization:
I-Semalt inikezela ngezinsizakalo eziphelele zokusebenziseka kuwebhusayithi ezisiza iwebhusayithi yakho ukuba ilele phezulu, ngokungasebenzi, futhi kalula ezinjini zokucinga ezifana ne-Google . Iwebhusayithi eyenziwe kahle ifinyelela kahle uma iqhathaniswa namamethrikhi afana nesisindo esijwayelekile sethrafikhi, inani lesikhathi esichithwe esakhiweni, futhi nesilinganiso esiphansi sokwehla, okusho ukuthi isibalo sabantu abavakashela isayithi lakho bese besuka ngokushesha. Iqembu lethu lochwepheshe be-SEO libhekelela izidingo ezithile zewebhusayithi yakho ngokwenza uhlelo lwe-SEO nokwenza ngcono kwewebhu okuheha abathengi abaningi futhi lusize ukuqhubekisela phambili ibhizinisi lakho.
Ukuqinisekisa ukuthi iwebhusayithi yakho ilayisha ngokushesha kungenye into ebalulekile yokwenza kahle kwewebhu. Uma kuthatha isiza sakho kuthatha imizuzwana engaphezu kwayi-3 ukulayisha, kunethuba eliphezulu kakhulu labasebenzisi lokukhungatheka futhi bahambe.
Lokhu kunciphisa ngqo ukutholakala kwamanani angenayo kanye nenombolo yokubuya, ngaleyo ndlela kuthinta ukuthi iwebhusayithi yakho ibekwa kahle kanjani. Amathuluzi we-Semalt SEO aqinisekisa ukuthi iwebhusayithi yakho yenziwe kahle ukuze ihlangabezane nakho konke okuhlosiwe futhi iyasabela ngokwanele ukuthi isebenze ngaphandle komthungo kuwo womabili ama-desktops kanye nezingcingo / amaphilisi ngoba ngaphezu kwe-50% yethrafikhi eku-inthanethi kutholakala ukuthi yakhiqizwa ngama-Smartphones kuphela.
Ukusebenziseka kahle kwewebhu kusho ukuthi izivakashi zakho ziba nokuhlangenwe nakho okuhle komsebenzisi lapho zivakashela iwebhusayithi yakho, zizenze zivame ukubuya futhi zikuhlole kaningi ngokuzayo.
2. Ucwaningo lwegama elingukhiye
S Izinsizakalo ze-AutoSeo ze-emalt kufaka phakathi ucwaningo lwegama elingukhiye olunzulu lwe-target niche yakho, ukwenziwa kwekhasi, ukwakha izixhumanisi, nemibiko yokuhlaziya yewebhu ehlobene nayo yonke eyenzelwe umgomo owodwa engqondweni: ukusiza iwebhusayithi yakho ukukhuphukela phezulu kwe-Google SERPS.
Kepha ukuze ubalwe, ithrafikhi yakho engase idinge izinkomba nezinkomba zokubonisa kobukhona besayithi lakho ukuze ikufinyelele. Ngabe uzibeka kanjani lezi zibonakaliso ukuze zifike kuwe?
Hhayi, ngocwaningo lwegama elingukhiye! Ngokweqiniso ayi-brainer. Ngoba masibe neqiniso, nesibalo sabasebenzisi abasebenza ngaphezulu kwebhiliyoni ezintathu, iwebhusayithi yakho ifana nenhlanzi encane olwandle olukhulu. I-Semalt ingakusiza ekuguquleni lokho.
Ukucwaninga kwegama elingukhiye kuyisisekelo se-SEO enhle, futhi ukwazi kahle ukuthi yimaphi amagama angukhiye wokufaka kokuqukethwe okufaka online ngeke kuchaze isikhundla sakho kuphela, kepha ithrafikhi yakho engenayo, ukusebenziseka kwewebhu, nokunye okuningi.
Noma ngabe umaketha umkhiqizo omusha, insizakalo noma ngokwakho, ukudala umongo kuyadingeka, futhi ukuthola amagama angukhiye afanele lowo mongo ukuphela kwendlela yokuqinisekisa iwebhusayithi yakho ifinyelela kubantu abaningi ngokwengeziwe.
Noma ngabe udinga ukusebenzisa amagama abalulekile amafushane noma amagama abalulekile amade, noma udinga nje ukuthola ukuthi isibalo esifanelekile sezikhathi sokusho igama elingukhiye siyini, uSemalt AutoSEO akakwazi ukuphendula yonke le mibuzo kuwe kuphela kodwa futhi uphatha nomsebenzi futhi . Ungakusho ukuthi ukhathazeke ngokwenza ucwaningo lwegama elingukhiye kuwebhusayithi yakho futhi uthembele ku-Semalt ukuphatha umsebenzi kahle.
3. Ukubhala Okuqukethwe:
Sikhulume ngocwaningo lwegama elingukhiye nokusetshenziswa okufanele ngenhla, kodwa ukuthola amagama angukhiye akuyona ukuphela kwenjongo. Indlela osebenzisa ngayo la magama angukhiye futhi ubhala okuqukethwe okukhuluma ezilalelini zakho kuzoba yisici esinqumayo sokugcinwa komsebenzisi.
Ngabe ukuheha kanjani ukunakwa ngumsebenzisi wakho, adlulise inkinga yakhe nesixazululo ngokungasebenzi, futhi ahambise okulindelwe?
Ukubhala okuqukethwe kungubuciko, futhi akuyena wonke umuntu ongumbhali ozelwe. Lokhu kushiwo, noma kunjalo, akusho ukuthi awukwazi ukufunda ukudala umthelela, kucace, kufushane, nokuqukethwe okufundisayo.
Kufanele uqonde ukuthi uma kukhulunywa nge-SEO, "abantu beza kuqala," futhi uma usuqonde lokho, kuba lula ukubhala okuqukethwe okuzokwenza izivakashi zakho zifakwe futhi ziqhubeke nokubuya.
Ukubhala okuqukethwe kusho nokuthi awubabhikishi abasebenzisi bakho ngezimpinda eziningi zamagama angukhiye ezingacasula futhi zenze abasebenzisi bazizwe belahlekile. Ubhalela ukuxazulula inkinga yabo, hhayi ukudala enye.
Okuqukethwe akufanele kuthandeke kuphela kubabukeli bakho okuqondiwe kepha futhi kufanele babe namandla okuxazulula inkinga abezale yona. Uma kungafinyeleli noma yiziphi zalezo zidingo, inani lezivakashi ezibuyayo ngeke likhuphuke.
Iqembu lokuloba lokuqukethwe likaSemalt elisebenzayo linamakhono kubuciko babo futhi lingasiza isayithi lakho likhuphuke futhi ligcine futhi ukungena nokugcwala kwetrafikhi.
4. Ukuthuthukiswa Kwewebhu
Kuze kube manje, besilokhu sikhuluma ngazo zonke izindlela amathuluzi we-Semalt SEO angasiza iwebhusayithi yakho ukuba ibalwe, noma kunjalo, uma ungenayo neyodwa okwamanje, ungakhathazeki. ISemalt ayigcini nje ngokubeka izingosi ezikhona, kodwa futhi yathuthukisa imibono nemibono ibe ngamawebhusayithi asebenzayo, ukusuka ekuqaleni.
Esikhathini sedijithali esiphila kulo, iwebhusayithi isebenza njengephothifoliyo, iqhubeke futhi, isitolo sokumisa yonke imininingwane oyidingayo kunoma yiliphi ibhizinisi. Ukuqinisekisa ukuthi kuyasebenza, kuyathandeka, kuyafundisa, futhi kuklanywe kahle kuyafana nokwenza umbono wokuqala ngesikhathi sokuthengisa.
I-Semalt ihlinzeka ithimba elinekhono labathuthukisi bewebhu abakwaziyo ngaphakathi nangaphandle kwamawebhusayithi. Ukusuka ekuthuthukiseni izitolo ze-E-commerce ukuphatha izinhlelo zokulawulwa kokuqukethwe, ithimba lethu lizonikezela ngezinsizakalo zokuthuthukisa iwebhusayithi ze-SEO ezisiza ibhizinisi lakho ukuba likhule.
Ngokuhlanganiswa okuphelele kwawo wonke amathuluzi we-SEO namasu, iwebhusayithi yakho izobalwa phezulu kungasiphi isikhathi.
5. I-Web Analytics
Okokugcina, enye indlela ebalulekile uSemalt asiza ukukala iwebhusayithi yakho ngokunikeza ama-analytics ngokusebenzisa i-Semalt keyword nameser Checker kanye ne-Web Analyzer ukuhlala ngaphezulu kwezitayela zakamuva.
Umhlaziyi ukhombisa ukuthi iwebhusayithi yakho ibekwa kude kangakanani ekhasini lemiphumela Yenjini Yokusesha ye-Google futhi inikeza amagama angukhiye angasiza ukukhulisa iphromoshini ye-SEO okuhlosiwe. Ubuye futhi ubheke ukuthi umncintiswano wakho uwenza kahle kangakanani futhi uthole ukuthi yini esebenzela bona.
Ama-analtics abaluleke kakhulu ukwenza izinqumo zesikhathi esizayo ezihlobene nokumaketha nemikhankaso ye-SEO ehlosiwe engeke ihehe kuphela amakhasimende amasha kepha futhi ithuthukise amazinga. I-Semalt ikunikeza lonke ulwazi oludingekayo ozodinga ukwenza lezo zinqumo kanye nezeluleko zochwepheshe zokuthatha izinyathelo ezilandelayo.
Izinsizakalo zeWeb Analytics zikaSemalt zingukuguqula umdlalo uma kuziwa kumikhankaso yakho ye-SEO.
Ubani Ongazuza Kumathuluzi We-Semalt we-SEO Nama-Web Analytics?
Manje, uma uzibuza ukuthi ngubani ongasizakala ngamathuluzi we-Semalt SEO kanye ne-analytics yewebhu, impendulo emfushane yinoma ngubani wonke umuntu okhona online.
Impendulo ende, ngakolunye uhlangothi, yinoma yimuphi umnikazi webhizinisi, usomabhizinisi, izinkampani ze-niche, noma abahlinzeki bezinsizakalo abathile abadinga ukuthengisa amakhono abo kwi-inthanethi futhi badinga ikhasi lokungena lezethameli zabo ezihlosiwe.
Noma ngabe ungumlobi wezempilo nendlela yokuphila, noma umhleli wencwadi othanda izindaba, noma umsunguli wezobuchwepheshe othokozela ukubuyekeza amagajethi amasha emakethe, amathuluzi eSemalt SEO angasiza iwebhusayithi yakho ukuthi ifinyelele ababukeli abaningi emhlabeni jikelele.
Ungagcini nje ngokuthola ukuqonda okwenziwe ngezifiso kwe-niche yakho, kepha nazo zonke izinsizakusebenza endaweni eyodwa, obekungadingeka ukuthi uzibhekele ngawodwana.
Ngakho-ke, noma ngabe ufuna ukukhulisa ibhizinisi lakho online noma ufuna ukuthengisa ama-quirky design akho kuwebhusayithi yakho, uSemalt uzokusekela futhi aqinisekise ukuthi iwebhusayithi yakho yenziwe kahle nge-SEO, futhi ibhizinisi lakho lizochuma iminyaka eminingi lisebenza.
I-Semalt ingumhlinzeki wokuthengisa okugcwele okugcwele we-SEO ozungeze wonke ozothatha ibhizinisi lakho online. Noma ngabe ufuna ukwenziwa kwewebhusayithi, ukuthuthukiswa kwewebhu, ama-analytics, noma umane udinga usizo ekwakheni okuqukethwe okubhekiswe ngokuphelele namagama angukhiye afanele, vele uthinte thina.
Amathuluzi nezinsizakalo ezinikezwe nguSemalt kuzoqinisekisa ukuthi iwebhusayithi yakho ibekwa phezulu kuGoogle. Ngale ndlela, uzohlala isinyathelo esisodwa ngaphambi komncintiswano wakho futhi uthole ithrafikhi ethe xaxa yokwenyusa imali.
ISemalt inamaphakeji ahlukile kuhlobo ngalunye lomnikazi webhizinisi; noma ngabe udinga i-AutoSeo, i-FullSEO, i-Web Development noma i-Web Analytics, thintana nethimba lethu namuhla ukuthola ukuthi yini esebenza kahle kuwe nebhizinisi lakho, ukuze sikwazi ukuqala uhambo lokuthi iwebhusayithi yakho iwe phansi.
Ama-analtics abaluleke kakhulu ukwenza izinqumo zesikhathi esizayo ezihlobene nokumaketha nemikhankaso ye-SEO ehlosiwe engeke ihehe kuphela amaklayenti amasha kodwa futhi ithuthukise amazinga futhi.